Ajụjụ - Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd.
Kedu ihe bụ isi uru nke ngwongwo gị? Kedu nke kacha pere mpe？
Mkpanaka carbide tungsten anyị na ndụmọdụ carbide bụ ndị ama ama maka oke mma na ọnụahịa asọmpi. Ezi mma na -erite uru site na njikwa njikwa siri ike yana ahịrị mmepụta teknụzụ dị elu. Enweghi oke ọnụọgụ nke mkpanaka carbide maka usoro ikpe izizi. Mana n'usoro nke abụọ, mkpokọta mkpanaka carbide ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 1000USD.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị ma ọ bụrụ na m chọrọ ịzụta ụfọdụ mkpanaka carbide ma ọ bụ ndụmọdụ carbide?
T/T ga -abụ nhọrọ ka mma. A nabatara L/C na Western Union. Ekwesịrị ịkwụ ụgwọ 30% tupu imepụta, yana ekwesịrị ịkwụ ụgwọ 70% tupu mbupu. Ma ọ bụ L/C na anya maka nnukwu ego iwu.
Anyị na-enye ndị ahịa ahịa ahịa ahịa mgbe ahịa gachara. Anyị ga-amalite usoro ọrụ ire ahịa otu mgbe ịnata mkpesa ọ bụla maka iji ngwaahịa anyị. Mbụ, anyị ga -ekpebi isi nsogbu ahụ, wee nwaa inyere gị aka idozi nsogbu a na ndị otu ọrụ aka ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta nsogbu ahụ dịka akụkọ gị siri dị, mgbe ahụ anyị nwere ike chọọ enyemaka gị ka anyị zighachi ụfọdụ ihe ọjọọ (n'ezie, anyị ga -akwụ ụgwọ ụgwọ mbupu) maka nyocha ọzọ. Mgbe anyị nyochachara ihe ndị nwere nsogbu, anyị ga -achọpụta ihe kpatara ya na azịza ya, mgbe ahụ anyị ga -enye gị ezigbo azịza. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-emegharị ngwaahịa ọhụrụ tozuru oke n'efu maka nnọchi. (Nkọwapụta ga -abụrịrị na egosipụtara na nsogbu ahụ bụ ngwaahịa n'onwe ya, ọ bụghị ihe ndị ọzọ, dị ka atụmatụ adịghị mma, nsogbu ụfọdụ n'ihi mbupu)
Ị nwere ike ịnye m ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ nrụpụta carbide gị?
Ụlọ ọrụ Toonney nwere ala atọ, ụlọ akwụkwọ na -ekpuchi ihe dịka square mita 8000. Anyị nwere ahịrị mmepụta zuru oke site na nkwadebe usoro ruo ngwaahịa emechara emecha, igwe agwakọta & igwe ihicha, igwe na -agba bọọlụ, debininding Sintering Furnace, Press, CIP, CNC form machine, extrusion machine, sintering furnace. Ngwa nyocha, dịka ọmụmaatụ, microscope metallographic dị elu, HV, onye nnwale HRA, SEM, onye nyocha carbon, onye nyocha T-RS. Uru nke Toonney bụ ndị otu ọrụ aka ọrụ ya yana systerm njikwa njikwa ike. Nabata gị ka gị na anyị rụkọọ ọrụ na ụlọ ọrụ a.
Kedu ihe bụ isi ahịa mkpanaka carbide gị?
Isi ahịa oke osimiri maka mkpara anyị bụ USA, Europe na Asia. Anyị bidoro ịzụ ahịa mkpanaka carbide kemgbe ụlọ ọrụ ahụ hiwere na 2011. Tupu nke ahụ, ndị otu teknụzụ anyị na -ewu ma na -ebupụ nnukwu ite ọkụ, Ọzọkwa, anyị guzobekwara akara THRONE na igwe na -emepụta igwe siri ike kemgbe 2008, akara ama ama Asia ugbu a bụ nke nye ụlọ ọrụ anyị ọzọ THRONE VACUUN TECHNOLOGY COMPANY.
Kedu asambodo ị nwere maka mkpanaka carbide ma ọ bụ ndụmọdụ carbide?
Ruo ugbu a, anyị nwere ikikere 9 na mkpanaka carbide yana imepụta ndụmọdụ.
Ngwa etinyere extrusion etinyere na mmepụta carbide tungsten
Ngwaọrụ etinyere na carbide oghere demention machining
A na -etinye ihe eji eme ihe maka ịkpụzi isi igwe
A na -etinye ihe nrụnye maka ịkpụzi igwe na -akpụ akpụ
Ngwa ihe na -ewepu ihe maka nnukwu ite ọkụ
Mbadamba cone nke nwere chamfer na -agwụ ike
Ụlọ ọrụ gị ọ sonyere n'ihe ngosi ọ bụla?
Anyị na -aga ihe ngosi Canton, CIMT, ihe ngosi ngwa ngwa, DMC na China kwa afọ, anyị wee malite atụmatụ ihe ngosi oversea nke abụọ nke afọ 2015. Ihe ngosi izizi mbụ anyị na -aga bụ FEBTECH2015 na Chicago.
Ị nwere ike ịme mkpanaka carbide ahaziri ma ọ bụ ngwaahịa carbide ndị ọzọ?
Ee. Enwere ike ịhazi nha na ụdị mkpanaka carbide ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mkpanaka ndị nwere udi nrịgo ụkwụ, ọnụ carbide na ụdị dị iche iche dị iche iche, dabere na iji dị iche iche, nwere ike ịdị oke mgbagwoju anya maka ihe ndị ahịa chọrọ. Maka nhazi nke ọ bụla, naanị ị ga -akọwa ihe achọrọ n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụ ka mma na ịbịaru nkọwa, mgbe ahụ anyị ga -emepụta ngwaahịa dịka ihe ị chọrọ.